यौन सम्बन्धि जानकारी – MeroJilla.com
जाने होइन त ? अनौठो मेला, जहाँ यौन सम्पर्क गर्न छुट हुन्छ Friday, March 8th, 2019
मेलाको नाम आउने बित्तिकै झिलिमली, रंगिचंगी, नाचगान, पकवान आदिको झल्को आउँछ । तर यो दुनियामा यस्तो मेलाको आयोजना पनि गरिन्छ जहाँ मानिसहरु केवल यौन सम्पर्क कायम गर्नका लागि मेलामा पुग्दछन् । सुन्दैमा अनौठो लाग्ने र दुनियामा कहीँ पनि नभएको यस्तो रोचक मेला हरेक वर्ष अमेरिकामा आयोजना गरिन्छ । नेवादा मरुभूमिको ब्लाक रक सिटीमा हरेक वर्ष बर्निंग मेन नामक महोत्सवको आयोजना..
श्रीमानको लिङ्ग लामो भएको भन्दै श्रीमतिले हालिन मुद्दा ! Saturday, February 23rd, 2019
एक महिलाले आफ्ना पूर्वप्रेमीविरुद्ध अनौठो उजुरी गरेकी छिन् । पूर्वप्रेमीको लिंग असाधारण किसिमले लामो हुँदा आफ्नो भेजिना (योनी) मा क्षति पुगेको उनको दाबी छ । सिलिण्डाइल मान्गेना नामकी २९ वर्षीया महिलाले ३७ वर्षका पूर्वप्रेमी मुगोभ कुरिमाविरुद्ध मुद्दा हालेकी हुन् । ती महिलाका अनुसार उनी उक्त क्षतिविरुद्ध शल्यक्रिया गर्न गइरहेकी छिन् । तर उनले यसको खर्च भने..
बेलायती राजकुमारी मेगनले जब यौनकर्मीलाई केरा बोक्रामा यस्तो लेखेर दिइन् Monday, February 4th, 2019
काठमाडौं । बेलायती राजकुमार ह्यारीकी पत्नी मेगन मार्कल यही शुक्रबार आफ्ना पतिको साथमा साउथवेस्टस्थित ब्रिस्टोलमा एक आकस्मिक भ्रमण गरिन् । यौनकर्मी महिलाको उद्धारको लागि काम गर्ने ‘ट्वेन्टी फाइभ च्यारिटी’ नामको संस्थाको निम्तोमा त्यहाँ पुगेकी थिइन् । तर त्यहाँ पुग्दा उनले यौनकर्मी महिलाप्रति प्रकट गरेको मानवीय भावना र सहानुभुतिको अहिले चर्चा भइरहेको छ । च्यारिटीको..
नाकले बताउँछ लिंगको आकार Saturday, January 19th, 2019
काठमाडौं । पुरुषको लिंगको आकार तथा प्रकारका बारेमा निकै चर्चा हुन्छन् । लिंग सामान्यतः सबै पुरुषको एकै प्रकारको हुँदैन । भिन्न भिन्न पुरुषको आफ्नै प्रकृतिको लिंग हुन्छ । जस्तैः बाङ्गो, टेडो, पातलो, मोटो तथा अनेक प्रकृतिको । खासमा लिंगको साइजले यौन सन्तुष्टिमा धेरै प्रभाव नपार्ने अनुसन्धानकर्ता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । यद्दपी कतिपय सेलिब्रेटीहरुले त खुलेरै..
कुन बिधि आयो यस्तो ? श्रीमान बिदेशमा भए पनि श्रीमतीले बच्चा पाउन सक्छन्’ – डा उमा श्रीवास्तव Wednesday, January 2nd, 2019
निसन्तान केन्द्र बानेश्वरकी प्रमुख डा. उमा श्रीवास्तव २५ वर्ष देखि प्रजनन् तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रुपमा काम गर्दै आएकी छिन् । चार हजार भन्दा बढी निसन्तान दम्पतीलाई कृतिम विधिबाट सन्तान जन्माउन सहयोग गरेकी श्रीवास्तवसँग निसन्तानको समस्याका बारेमा गरेको कुराकानीः कहिल्यै पनि बच्चा नहुने हुन्छ कि हुँदैन ?यो एकदमै कममा मात्र हुन्छ । एक पाठेघरमा दीर्घ रोग लागेमा र अर्को..
सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देख्नुहुन्छ ? निकै खतरनाक हुन सक्छ Sunday, December 30th, 2018
एजेन्सी। मानिसहरुले विभिन्न किसिमका सपना देख्ने गर्छन् । यीमध्ये केही सपनाको खास अर्थ हुन्छ । केही सपनाको भने उतिसारो महत्व हुँदैन । यदि सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देखियो भने यसको फरक फरक अर्थ हुन सक्छ । यस्तो सपनाको अर्थ यो कुरामा निर्भर गर्छ कि तपाइँको पार्टनर को हुन्छ ? यदि तपाइँ सपनामा अपरिचित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको देख्नुहुन्छ भने तपाइँको दाम्पत्य जीवन..
३० लाख किशोरीलाई पहिलो महिनावारीबारे जानकारी नहुदाँ समस्या,नेपालले प्रजन्न स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकेन Wednesday, December 12th, 2018
काठमाडौँ– पछिल्लो जनगणनाअनुसार १० देखि १५ उमेर समूहका ३० लाख किशोरी रहेका छन् । तीमध्ये अधिकाशंलाई पहिलो पटक महिनावारी हुँदा के हुन्छ ? भन्ने जानकारी छैन । प्राकृतिकरूपमा महिलामा रागरस (हार्माेन)का कारणले डिम्बाशयबाट डिम्ब निष्कासन भएपछि बिस्तारै बाक्लो हुँदै गएको पाठेघरभित्रको भित्री तह तुहिएर रगत बग्ने प्रक्रियालाई महिनावारी भन्ने गरिन्छ । महिनावारी हुनु भनेको..
हस्तमैथुन र वीर्य स्लखन Sunday, September 30th, 2018
डा. राजेन्द्र भद्रा आश्विन ६, २०७५ म २४ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मेरो विवाह भएको ५ वर्ष भयो । मेरो ४ वर्षको एउटा छोरा पनि छ । म आफ्नो जागिरको सिलसिलामा प्राय: बाहिर नै रहन्छु । म र मेरी श्रीमतीबीच साधारणत: शारीरिक सम्बन्ध भैरहेकै हुन्छ । कुनै समय कार्यव्यस्तताले अलि लामो समय घर जान नपाउँदा म हस्तमैथुन पनि गर्छु । पछिल्लो समय लगभग २–४ महिनादेखि हस्तमैथुन गर्दा मेरो वीर्यमा..
भावी दम्पतीबीच यौन छलफल Sunday, August 26th, 2018
डा. सुमनको सल्लाह डा.सुमनराज तम्राकार नेपालमा अधिक प्रचलित मागी विवाहका क्रममा भावी दम्पतीबीच अन्य पक्षमा व्यापक छलफल हुने भए पनि यौनका विषयमा खासै छलफल हुने गरेको छैन । नेपालमा विवाहपछि मात्र यौनसम्पर्क राख्ने सामाजिक तथा कानुनी मान्यता छ । बाल्यावस्थामा यौनसम्बन्धी जिज्ञासा दबाउने तथा किशोरावस्थामा आवश्यक मात्रामा यौन शिक्षा नदिइने कारण विवाह लगत्तै दम्पतीबीच एक..
शारीरिक सम्बन्ध राख्न नमान्दा प्रेमिकाको हत्या Sunday, July 22nd, 2018
वीरगञ्ज । भारतीय युवती वनिताकुमारी चौधरीको हत्या आफ्नै प्रेमीले गरेको खुलेको छ । सन्केसा भन्ने वनिताको शव ३१ असारमा पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका-४ सुहपुरस्थित गंगोली भन्ने भलुवाई खोलामा भेटिएको थियो । कपडा, औठीलगायतका आधारमा आफन्तले उनको शव पहिचान गरेको थियो । हत्याको आरोपमा जगरनाथपुर गाउँपालिका ४ सुहपुरका १९ वर्षीय प्रमेन्द्र चौधरी पक्राउ परेका छन् । उनी मृतक १८..
यी साधानः प्रयोग गर्दैनन् किशोरकिशोरी ! Sunday, July 15th, 2018
काठमाडौं - परिवार नियोजन लक्षित धेरै कार्यक्रम र योजना सरकारले ल्याए पनि किशोरकिशोरीमा यसको प्रयोग भने निकै कम पाईएको छ । जनचेतना कमी, गोपनीयता नहुने र वैदेशिक रोजगारका कारण उनीहरुमा यसको प्रयोग न्युन भएको हो । वैदेशिक रोजगारीका कारण नवविवाहित दम्पत्ती लामो समयसम्म छुट्टिएर वस्दा उनीहरुबीच योनसम्पर्क नहुँदा साधन प्रयोगमा युवाको तथ्यांक न्युन देखिएको विशेषज्ञ..